Ukukhutshwa kweNdawo yokuNciphisa ukuThengisa ukuThengisa ukuThengisa
Ikhaya / izicelo / Ukunciphisa ukuFaka / Induction Shwabanisa Lokulinganisa
Udidi: Ukunciphisa ukuFaka tags: ku qulunqwa, ukufudumeza ukufudumeza kuncipha, Ukuchithwa kwehlisa ukulungiswa, umshini wokufakelwa wokunkcenkceshela, ukufudumeza kuncipha, Umatshini wokudibanisa i-RF, Inkqubo efanelekileyo
Ukuchithwa kwehlisa ukulungiswa ibhekisela ekusebenziseni iteknoloji yokucima inkunkuma ngaphambi kokutshisa izakhi zetsimbi phakathi kwe150 ° C (302 ° F) kunye ne-300 ° C (572 ° F) ngoko kubangele ukuba bandise kwaye bavumele ukufakwa okanye ukususwa kwelinye iqela. Ngokuqhelekileyo uluhlu oluphantsi lokushisa lusetyenziswa kwizinyithi ezifana ne-aluminium kunye nokushisa okuphezulu kusetyenziswa kwizinyithi ezifana ne-low / medium carbon steels. Inkqubo inqanda ukuguqulwa kweepropati zemishini ngelixa kuvumela ukuba izinto zisebenze. Iimpawu ziyakwandisa ngokuphendula ukutshisa kunye nekhontraki yokupholisa; Impendulo enesibindi ekutshintshisweni kweqondo lokushisa ibonakaliswe njengomlingani wokunyuka kwamafutha.
Ukutshisa ukutshisa yinkqubo yokushisa yokungafowunelwayo esebenzisa umgaqo ukufakelwa kwamandla kagesi ukuvelisa ubushushu kwisiqwenga somsebenzi. Kule meko ukwandiswa kobushushu kusetyenziselwa isicelo sokulungisa iinxalenye ngaphezulu kwenye, umzekelo, ityholwana lingafakwa ngaphezulu kweshafti ngokwenza ububanzi balo bangaphakathi bube buncinci kancinane kububanzi beshafti, emva koko buwufudumeze bube bulingane ngaphezulu kweshafti , kunye nokuyivumela ukuba ipholile emva kokuba ityhalelwe ngaphezulu kweshafti, ngaloo ndlela kufezekiswa 'ukuncipha'. Ngokubeka izinto eziqhubayo kwindawo enamandla eguqukayo yemagneti, umbane unokwenziwa ukuba usebenze kwisinyithi ngokwenjenje ukudala ubushushu ngenxa ye2R ilahleko kwizinto eziphathekayo. Ukuhamba kwezinto ezikhoyo ngokubanzi kwiindawo ezingaphezulu. Ubunzulu balobu buncwane obunikwe ubungakanani bendawo yokutshintshela kunye nokukhangela kwezinto eziphathekayo. Ukufudumala kwama-heaters for fitting fit fall into two categories wide:
· Iiyunithi zeeyunithi eziqhelekileyo zisebenzisa ama-magnetic cores (isinyithi)
Isimo sool (i-electronics) iMF kunye ne-RF Induction Heaters
Ukukhutshwa kweNkunkuma kuNciphisa amaGraft Shaft Fitting
Nciphisa iStator eFanelekileyo kunye neRotor ngokuKhupha